Umlando we-Douro - I-Airbnb
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Miragem Do Douro
I-"Mirage of Douro" House isendaweni ethandwayo, endaweni ephakeme enombono we-panoramic phezu komfula i-Douro. Yindawo ekahle yokunqamula esimisweni sansuku zonke futhi uhlangane nemvelo, usebenzisa ithuba lolwandle lomfula, umfula kanye nehlathi elinikezwa yisifunda.
Izimiso eziyisisekelo zeNdlu INKULULEKO, UKUXHUMANA NEMVELO kanye nokunqanyulwa kwe-TECHNOLOGY. Njengoba iNdlu yodwa futhi ihlanganiswe ezweni eliluhlaza, inikeza ukuthula, ukuphumula nokuthula.
I-"Mirage of Douro" House isineminyaka engamakhulu ambalwa ikhona, ibe enye yezindlu zokuqala emaphethelweni e-Douro.
Ekuqaleni, le Ndlu ibihlanganisa kuphela izindonga zamatshe ezine ezinkulu, ezisanda kubuyiselwa futhi zanwetshwa. Yabe isithola isakhiwo ngokhuni lwemvelo kanye nengaphambili lengilazi elihlinzeka, kuzo zonke izigaba, umbono we-panoramic phezu komfula i-Douro.
"I-Mirage of Douro" inezitezi ezi-3, phansi indawo yokupheka neyokudlela, isitezi sokuqala indawo yokuhlala, okungenzeka kube nombhede wabantu ababili kanye negumbi lokugezela elivulekile, elineshawa. Isitezi esiphezulu sinokungena ngaphandle, okuyigumbi elihlinzeka ngobumfihlo obuningi, elinemibhede ephindwe kabili kanye nokufakwa kwezindlu zangasese endaweni evulekile.
Ulwandle lomfula e-Cais de Bitetos luwuhambo lwemizuzu eyi-10, futhi lungaphansi kwemizuzu emi-5 ngemoto, lapho kutholakala khona amakhefi/izindawo zokudlela. Kukhona ithuba lokuhamba ngesikebhe, i-pedal boating, i-jet skiing, ngisho nemizila emincane yezikebhe.
Ngalezi zindlela zokuthutha kungenzeka ukuthi uvakashele inganekwane ethi "Ilha dos Amores", efanelekile emapikinikini, ukuhamba ngezinyawo okufushane noma ukushona kwelanga, ehlukanisiwe nempucuko.
Ukusuka edolobheni lase-Alpendurada e Matos kuya eNdlini cishe imizuzu eyi-10 ngemoto, lapho kunezitolo ezinkulu, amakhemisi, phakathi kwezinye izinsiza ezijwayelekile.
Ibungazwe ngu-Miragem Do Douro
Siyohlale sitholakala kunoma yisiphi isimo, nge-WhatsApp noma nge-E-mail.
Ngokwami, ezimweni ezingavamile kuphela ngenxa yezizathu zokufuduka.
Nokho, sizokwamukela njalo Ekungeneni nasekuphumeni.
Inombolo yepholisi: 100573/AL
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$527.